Ilay saka vavam-boasary: ​​toetra, toetra, vidiny ary maro hafa! | Noti saka
El saka tabby voasary azonao atao ny maniry ho biby mivoaka indrindra amin'ny saka an-trano rehetra. Misaotra an'i Garfield, saka sariitatra tianay indrindra taminay izay zaza tamin'ny taona 90, lehilahy volom-borona ity izay afaka mamitsiky ny tarehintsika isan'andro amin'ny fijerena antsika fotsiny.
Ary ny zavatra hita dia malefaka be ny fijeriny, ary zavatra tsiroiny tsara izany: matetika izy io no mampiasa azy mba hahazoana izay tadiaviny, avy amin'ny vatomamy ka hatramin'ny safosafo. Ny mahatsikaiky dia mahazo izay tianao foana ianao, satria ... Iza no afaka tsy miraharaha ilay sakaitra taby voasary?
1 Fiandohana sy toetran'ny saka saka
2 Genetika ny saka tabby
3 Ny fitondran-saka saka taboo voasary
4 Vidy taby orange
5 Ahoana ny fomba hisafidianana sanganasa tsara hividianana saka tabby?
Fiandohana sy toetran'ny saka saka
Ny lamin'ireto biby tsara tarehy ireto dia iray amin'ireo tranainy indrindra; raha ny tena izy, raha ampitahaintsika ny saka dia (ohatra ny saka an-tendrombohitra) amin'izay saka saka ho hitantsika fa manana toetra iraisana marobe izy ireo.
Saka tabby orange, fantatra koa amin'ny hoe »tabilao volomboasary», Manana volony maro samy hafa izy ireo: mena, volomboasary, na koa mavo volamena. Araka ny Fikambanan'ny Cat Fanciers ', ny karazan'izy ireo dia afaka mamaritra ny fitondran-tenany, satria ny karazana sasany dia mitovy toetra amam-panahy.
Na izany aza, zava-dehibe ny milaza fa ny 'orange tabby' dia tsy karazany manokana, fa karazan-doko miloko izay miseho amin'ny karazany maro karazana. Saka saka iray misy loko, misy loko volomboasary, misy dian-kapoka eo amin'ny volony, tsipika amin'ny tarehiny sy manodidina ny masony ary karazana marika miendrika "M" eo amin'ny handrina. Ireo dian-kapoka matetika dia miseho alokaloka na roa maizina kokoa noho ny volomboasary volon'ny palitao.
Ary ireo feline ireo dia an'ny firazanana samihafa, satria samy manana volo lava sy lava volo.
Genetika ny saka tabby
Ny saka tabby dia mety manana loko isan-karazany. Ny Gen T (tabby) no miandraikitra ny fanapahana hevitra ny amin'ny volon'ny biby:
Tabby volamena: loko volamena na volomboasary.
Marbling na marbling (Blotched): tsipika miloko malalaka, ary miovaova ny fihodinan'izy ireo.
Tabby volafotsy: fototra miloko volafotsy.
Sivotra, soratana na marbled (Mackerel): Ity lamina ity dia misy dian-kapoka na fehy manerana ny vatana. Io no mahazatra indrindra.
Tompokolahy na tsikera: teboka aparitaka amin'ny vatana.
Tabby Tic (Voatondraka): misy stippling miloko isaky ny volo.
Tabby orange: toy ny fototr'ireo mahery fo, volomboasary na fotsy misy tsipika volomboasary somary mainty kokoa, izay mety ho hita manerana ny vatana na amin'ny toerana iray fotsiny.
Ny fitondran-saka saka taboo voasary
Ny saka izay manana io loko io mila mifanerasera tsara noho izany dia mety ho tonga olon-dehibe volom-borona te handany fotoana miaraka amin'ny ankohonany izy ireo. Ho an'izany dia zava-dehibe ny fandraisan'ny olombelona hatramin'ny volana sy tapany an-tsandriny izany ary hanomezany azy ny fitiavana; Noho izany, tsikelikely dia hatoky anao izy ireo ary, mandritra ny andro vitsivitsy, dia te-hilalao amin'izy ireo ianao. Rehefa lasa mahazo aina amin'ny olona ianao dia afaka misaraka amin'ny reninao. Tsy hatao izany raha tsy efa valo herinandro farafaharatsiny ny saka., satria mandritra ny roa volana voalohany amin'ny fiainany, ny renin'izy ireo sy ny iray tam-po aminy dia hianatra ny ho saka rehetra: mifehy ny herin'ny manaikitra, milalao, aza manalavitra lavitra ny toerana azo antoka, na madiodio.
Toy ny volom-borona rehetra entintsika mody, ny tabby volomboasary mila fikarakarana ara-biby ianao: Handray anao izahay hijerena anao indray mandeha isan-taona, ary hanome anao ny vaksiny rehetra takiana. Tsy hadinontsika koa ny manadilo azy, indrindra raha tsy mikasa ny hitaiza azy isika na raha mahazo alalana hivoaka izy. Amin'izany fomba izany, amin'ny tsy mila mandalo hafanana, dia hilamina kokoa sy haharitra kokoa ny fiainanao, satria mihena be ny mety ho voan'ny homamiadana.
Ity dia fidirana an-tsehatra ataon'ny mpitsabo biby isan'andro, izay tsy maharitra mihoatra ny 30 minitra eo ho eo. Miarina haingana ny lahy, raha ny tena izy, azo inoana fa tamin'io andro io ihany dia efa te hiverina amin'ny fiainany mahazatra izy ireo; maharitra kely kokoa ny vavy: manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 andro, fa raha dinihina fa afaka mankafy ny taonan'ny fiainany bebe kokoa izy ireo dia mendrika izany. Ary izany ve Ity dia fidirana an-tsehatra izay hisy fiantraikany amin'ny toetran'ny saka, hahatonga azy io hijanona, ho tony ary ho tia fiaraha-monina mihitsy aza.
Na izany aza, ny fomba fitsaboana anao any an-trano dia ho tapa-kevitra. Raha ampianarina am-panajana, fitiavana ary indrindra indrindra, faharetana be dia be aho, azoko antoka fa tsy hanana olana amin'ny fitondran-tena velively ity volony ity. Mifanohitra amin'izany no izy, raha tsy raharahina izy io na ampijalina, dia hiara-miaina amin'ny saka matahotra ny anao sy ny olombelona rehetra ianao, tsy ho faly.
Izany dia nilaza, mividy kilalao Eny, tia milalao ity saka ity. Noho io antony io, raha manan-janaka ianao, dia ho lasa sakaizany vaovao volom-borona izy 😉.
Vidy taby orange
Ity saka tsara tarehy sy sariaka ity afaka mahita izany ianao any amin'ny toeram-pialofana biby, toy ny amin'ny fiarovana, izay tsy andoavanao vola amin'ny fandaniana amin'ny fananganana zaza fotsiny. Ity vidin-javatra ity matetika dia manodidina ny 80 euro, izay ahitana microchip, vaksininy ary deworming.
Ok izao raha mila saka saka misy volo volomboasary ianaoSatria izy io dia mety ho ny Manx na Maine Coon, dia mila mitady trano famelabelarana matihanina ianao izay natokana hananganana ireo volony ireo, ary mikarakara tsara azy ireo koa. Ho an'ny saka afaka manontany anao mora foana izy ireo eo anelanelan'ny 300 sy 500 euro, arakaraka ny karazany.
Ahoana ny fomba hisafidianana sanganasa tsara hividianana saka tabby?
Ny kennel lehibe sy matihanina dia manana ireo toetra ireo:
Madio ireo toerana misy ny saka, tsy misy fofona na tasy.
Salama sy faly ny biby.
Mandany fotoana betsaka araka izay itiavany an-dreniny ireo zanak'osy, izay tsy hisarahan'izy ireo raha tsy efa 2 na 3 volana.
Ny mpitantana dia mamaly ny fanontanianao rehetra.
Amin'ny fotoana anaterana dia homeny anao koa ny taratasy rehetra mifandraika amin'ny razamben'ilay biby.
Raha mahita zavatra tsy dia maharesy lahatra anao ianao dia mihodina mitadiava kennel iray hafa.
Ny saka tabby voasary dia biby mahatalanjona. Manana volo ve ianao ao an-trano?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » miteraka » Ilay saka vavam-boasary
90 hevitra, avelao ny anao
wii ana cristina dia hoy izy:
Manana saka toa izany aho, tena tsara tarehy, karazany mahafatifaty tokoa izy ireo 🙂
Mamaly an'i wii ana cristina
Eny ny marina 🙂
voninkazo dia hoy izy:
iza no anaran'io hazakazaka io
Ny saka tabby orange dia tsy an'ny karazany ekena. Tigra volomboasary kely fotsiny izy ireo 🙂.
Salama, manana zanakalahy kely 3 volana aho izay natolotra ho fananganana ahy saingy tapaka ny volombavany amin'ny lafiny iray. Hitsangana indray ve izy ireo?
Valiny tamin'i Heidy
Tsia, indrisy fa tsy 🙁
Breendha dia hoy izy:
Raha hitombo izy ireo: mangina 3
Valiny tamin'i Breendha
Barbara Diaz dia hoy izy:
Ao an-trano aho manana tabila volomboasary volom-borona. Tena be fitiavana izy ary tena sariaka; omeny fitiavana ny olon-drehetra. Ary misy foana isaky ny fotoana rehefa mizara ao an-trano
Valiny tamin'i Bárbara Díaz
Paula Cruz dia hoy izy:
Mikasa ny handray saka saka aho fa tsy azoko antoka hoe firy taona izany.
(ny saka dia mania) ary tsy dia haiko tsara ny manabe azy, masiaka be izy ary tena tiako ny mandray azy
Valiny tamin'i Paula Cruz
Mety matahotra ilay saka ka noho izany dia manao toy izany.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahazo ny fahatokisany. Ento ny saka kaliny dia omeo azy. Aza mikasika azy amin'ny voalohany, fa rehefa mandeha ny fotoana dia ho zatra ny fanatrehanao izy, ary amin'izay izy hanatona anao. Amin'izay fotoana izay dia rehefa afaka manandrana mikolokolo izany ianao, ary manao hetsika malefaka foana.
Amin'ny faharetana dia mety ho tonga sakaizanao vaovao io saka io.
firavaka dia hoy izy:
Naka saka tabby voasary aho ary tsy te hihinana fahana x + izay marika avo lenta. mba andefaso torohevitra. ny saka dia 1.1 / 2 taona ary avy amin'ny toeram-pialofana izay nisy azy nandritra ny 3 na 4 volana. Nomeko azy ny ronono, fromazy fanosotra, ary saka fanarenana canin mpanjaka. inona koa no azoko omena anao. Misaotra anao
Ny torohevitra omeko anao dia ny hanomezanao sakafo tsy misy serealy, katsaka, orza, na derivatives. Tsy mila izany ny saka ary raha ny marina dia tsy afaka mandevona azy tsara.
Safidy iray hafa dia ny manome henan'akoho masaka, atiny ary hena taova.
Tsara, Sara. Azo antoka fa faly be eo anilanao izy.
Yrina dia hoy izy:
Manana saka toy izany aho, ny marina dia nalaiko avy teny amin'ny arabe, ary tena mahafatifaty, midika izany fa efa iray volana aho no nitomany ary tsy mitomany izy rehefa tsy voadinika
Valio i Yrina
Salama, manana zanak'ondry tabby roa herinandro aho, azoko atao ve ny mandro azy? Manana parasy marobe izy, sariaka be izy ary omeko ronono raokely ho an'ny zanany vao teraka, firy na herinandro na volana no ilany an'io karazana ronono io ?
Mbola kely dia kely izy 🙁. Na izany aza, azonao atao ny mametraka fanafody voajanahary izay ho hitanao any amin'ireo magazay biby.
Mikasika ny ronono dia tokony hosotroinao mandritra ny 3 herinandro farafahakeliny.
lilianamoncadablog dia hoy izy:
Nanana tabby volom-borona aho saingy maty io, any an-trano aho izao manana roa, ny iray mitovy loko. Ny fanontaniako dia hoe afaka mihinana sakafo voalanjalanja ve ity karazana saka ity? , satria ny saka teo aloha dia maty noho ny aretin'ny lalan-drà, nanana olana tamin'ny voa ary tsy nahatohitra. Ampio aho, matahotra aho fa toa izany koa no hanjo an'ity volony ity!
Mamaly an'i lilianamoncadablog
Ny saka dia tsy maintsy manana sakafo mifototra amin'ny hena, satria biby mpihinana nofo. Tsy tsara ny manome serealy na ny toy izany, satria tsy mila izany izy ireo ary, ho fanampin'izany, dia afaka manome alèjika azy ireo izany.
Lau dia hoy izy:
Salama, manana zanak'akanjo taby voasary aho, tena simba izy ary tia manintona ny saina. Saingy androany, nanaiky azy, nahatsapa baolina kely teo anelanelan'ny kibony sy ny tongony aho. Iza no mety ho? Mba hahazoana hevitra raha afaka mitondra azy any amin'ny vet aho
Mamaly an'i Lau
Sarotra ho fantatra izany. Mety ho tratra fotsiny izy io, saingy mety nitelina zavatra tsy tokony nananany, na nety ho fivontosana vokatry ny kaikitry ny bibikely.
Manana bilaogy tena milay ianao !!! arahabaina, tiako fa manoratra zavatra mahaliana, manampy ary manoratra faran'izay tsara foana ianao. Vao naka zanak'akanjo tabby voasary aho ary vaovao amin'ny tontolon'ny saka, ka tonga lafatra amiko ny bilaoginao.
Misaotra betsaka amin'ny teninao 🙂
Faly aho fa manampy anao io.
Arahabaina amin'ny volonao! Afeno ny tadiny sy ny kofehy, tiany ny milalao amin'izy ireo lol
Salama! Nasain'i Faraona nanatona ahy ny zana-boasary roa satria maty ny renin'izy ireo. Telo herinandro izy ireo. Nivoaka tamin'ny ezaka sy fitiavana be dia be izy ireo. Roa volana sy tapany izy ireo izao ary mampody ahy adala! (Amin'ny fomba tsara)
Rahoviana ianao no manoro hevitra ahy handroaka azy ireo? Novakiako izany nanomboka ny 6 volana? Raha azoko atao dia handefa sary aho mba hahitanao ny hadisoako. Mirary ny soa indrindra
Miarahaba an'ireo mpikambana vaovao roa ao amin'ny fianakaviana 🙂
Mba hanonerana azy ireo, eny, farafaharatsiny mba mila miandry mandra-pahatongan'ny enim-bolana izy ireo. Misy dokotera manao an'io taloha, miaraka amin'ny 5, saingy manoro hevitra anao aho hiandry kelikely, mba hivoatra kokoa ny vatany ary ho sitrana haingana.
Naka zanak'ondry voasary izahay, ny olana dia manaikitra be izy, tsy maintsy misy iray eo anelanelan'ny roa aminao
telo volana, ahoana no ahazoako azy tsy hanaikitra ahy sy ny zanako, kasainareo izy ary milalao manaikitra
Mba hianaran'ny saka tsy hanaikitra dia mila mijanona ny lalao raha vao manaikitra anao izy ary, ambonin'izany rehetra izany dia manana kilalao eo anelanelan'ny biby sy ilay olona foana. Tsikelikely dia ho fantatry ny totohondry fa ilay kilalao no tsy maintsy hanaikitra azy.
Taty dia hoy izy:
Ny saka voaloko volomboasary no mpanjaka ao an-trano XD… .. 9 volana eo ho eo izy no nesoriko avy teny amin'ny arabe kely… ..ary tsy nisy lanjany ary toy ny fingotra ny taolan-tehezana .. .. androany dia mitovy amin'i Garfield ihany izy… .… .Noho ny fanabeazana tahaka ny olon-kafa…. Nandry teo amin'ny vavony izy mba hikosehana ny kibony sy ny tongony… .tsy malemy fanahy toa ny saka mahazatra izy…. Miiiii malefaka ihany no ampitondrainy ……. tanora…. Volo volo tsara tarehy izy ...
Mamaly an'i Taty
Tena faly aho Taty 🙂. Ireo saka dia manana toetra manokana.
Miankina be ny saka ko, manaraka ahy izy na aiza na aiza tsy avelany hihinana, na hanao zavatra ary hilefitra amin'ny fotoana rehetra, hanana 2 volana izay ataoko izy, navotana tamin'ny arabe izy
Mety tsy te ho irery izy satria malahelo ny reniny sy ny iray tam-po aminy, ary tsy mahatsiaro ho irery izy miaraka aminao.
Ny torohevitra omeko anao dia ny hametrahanao eo am-pandriany ny akanjonao izay nampiasanao (fehiloha ohatra). Hahatsiaro ho tony ianao amin'izay.
Raha mangatsiaka izy dia aza raharahiana azy, raha tsy izany dia ho fantany fa miaraka amin'ireo meows dia hisarika ny sainao izy, ary tsy afaka izany satria tsy afaka miaraka aminy 24 ora isan'andro izy. Tandremo izy amin'ny fotoana ahitanao azy milamina kokoa. Amin'ny vidiny aloha, nefa rehefa mandeha ny andro dia ho zatra izany.
Mba hanampiana azy dia azonao atao ihany koa ny mampiasa feliway na vokatra fanefana tranquilizer amidy any amin'ny tobim-pahasalamana na fivarotana biby. Esory ny efitrano nandanianao fotoana betsaka indrindra, fa aza mivantana amin'ny saka (raha tsy asehon'ny vokatra izany, satria misy tsiranoka voajanahary azo ampiharina mivantana amin'ilay biby).
Sayuri dia hoy izy:
Salama, vao nandray zanak'omby kely iray volana aho androany, teo an-dalambe aho, nanaraka anay ny zanako ary ny tabilao volomboasary, nitondra azy tany amin'ny mpitsabo biby aho ary nasiako vozon'akanjo ary nasiako taminy ary tiany izany, tsapany ahazoana aina ary madio sy milamina tokoa hatramin'ny voalohany natao tamin'ny fasanao
Mamaly an'i Sayuri
!! Arahabaina !! Ankafizo ny orinasanao 🙂
Eny, manana saka vavam-boasarimakirana iray aho izay novonjeko fony izy 2 andro, lehilahy lehibe iray hafa no nihinana ireo rahalahiny, ary nanam-bintana izy fa teo aho, izao dia biby mahatalanjona, mbola tsy nahita saka hafa intsony ary mitondra tena toy ny hoe isika no lehibeny
Ny ronono ihany, ny olana tokana dia ny tsy famelana ny hikasihan'ny olon-tsy fantatra azy afa-tsy ireo izay miara-miaina aminy ihany.
Miarahaba anao 🙂
Manana saka toa izany koa aho, izay tsy matoky olon-tsy fantatra.
Azonao atao hatrany ny mangataka amin'ireo olona ireo hanome sakafo saka anao, mba hatokisanao azy ireo.
Faly izahay fa tianao ny bilaogy. Ary misaotra betsaka anao nizara! 🙂
tafika an-dranomasina dia hoy izy:
Manana saka tsara tarehy aho ao an-trano, imbetsaka izy manana lalao ratsy be, manaikitra sy misento nefa ny tarehiny dia mampiseho fa tsy noho ny herisetra, lalao ho azy ireo izany, rehefa misy ankizy ao an-trano dia lasa mampatahotra azy ireo izy nefa dia milalao amin'izy ireo, maro indraindray Sarotra amiko ny mijery fa kely sisa dia 1 taona
Zava-dehibe ny ianaranao tsy manoritra na manaikitra. Amin'ireto lahatsoratra ireto dia manazava ny fomba hampianarana anao izahay; eto y eto.
Manana saka miaraka amin'ireo toetra ireo aho, Milo no anarany, 9 volana izy, saka mahafatifaty tiany hilalao izy, matory manome azy ireo fitiavana. Matetika izy no milalao miaraka amin'ilay sakaizany tsara indrindra, ilay alika kely ao an-trano. namana tsara izy. Tsy misy zavatra ratsy holazaiko momba ny saka.
Azo antoka fa tena faly 🙂
Salama, naka tabby marbra tao amin'ny toeram-piantsonan'ny oniversitenako aho, natahotra aho fa ny Fitiavana no fahitako azy voalohany fa nanana alika foana aho saingy ity Kittère nantsoiko an'i Garfield ity satria mitovy amin'ny maditra nangalatra ny Foko izy, nanao tsy fantatro fa tena tia fatratra izy ireo na angamba karazana hazakazaka ity, tsy manenina aho matory miaraka amiko sy ny zava-drehetra ??? ... raha mampita ny Fahatokisana ianao ary manome azy ny Fitiavana dia zavatra mahafinaritra azy ireo ..
Valiny tamin'i Dayana
Manaiky tanteraka: raha manome fitiavana azy ireo ianao dia omeny anao ihany ... na mihoatra aza. Izy ireo dia tsara tarehy.
Arahabaina manana Garfield 🙂.
I Garfield io manao ratsy foana. Tsy hitanao ve aho any ivelan'ny trano lasa adala ...? IMG_0832.PNG
Ny saka rehetra, na inona na inona volon-volony, dia mihinana hena 🙂.
Katherin dia hoy izy:
Salama, maty ny sakaikako roa andro lasa izay, ary mavo misy tsipika volomboasary tsara tarehy izy, tamin'ny voalohany tsy dia tiako ny saka, raha ny marina dia nolaviko izy ireo saingy tonga izy ary nampiova ahy tanteraka ny zava-drehetra, 7 fotsiny izy volana maromaro ary niaraka tamiko ny 5. Rehefa tonga aho dia notantarain'ny fianakaviako fa maty noho ny dona mafy izy, saingy tsy fantatsika rehetra hoe avy aiza ilay fikapohana, saingy toa hafahafa be amiko izany satria tsy nisy rà izy, fa raha very kosa ny loko eo an-tsofiny, orona sy vavany, fotsy tanteraka izy ary nihalalaka tanteraka ny mpianany, avy hatrany taorian'ny daroka nahazo azy dia nivadika tanteraka izy ary nanetsika ny tanany fa tao anatin'ny minitra vitsy dia maty izy, tsy fantatro tsara raha nokapohin'izy ireo teo amin'ny hatony izany, na raha nisy fiara nifanena taminy, na dia tsy nanana famantarana nilaza aza izy fa voahitsakitsaka izy ireo. Malahelo be aho amin'ny fahafatesany, tiako ho fantatra raha mety ny mandray olona iray sy mitovy firazanana amintsika, hiezaka hiatrika ny alahelo. Misaotra miarahaba
Valiny tamin'i Katherin
Miala tsiny indrindra amin'ny fahaverezan'ny saka saka.
Momba ny fanontanianao dia miankina betsaka amin'ny tsirairay izany. Ny torohevitro dia ny miandry kely, mandra-pahasitranao kely amin'ilay duel. Avy eo ianao dia afaka mankafy ny saka »vaovao» bebe kokoa.
Viki dia hoy izy:
Salama, afaka mamahana ny sakafoko efa 4 herinandro aho. Omeko sakafo an-jaza voahidy pate izy avy eo ary avy eo bibi an'ny rononon-trondro vetivety fa tompoko, mamaha ny kibony izy misaotra
Valiny tamin'i Viki
Amin'ny 4 herinandro dia tsy mahazo mihinana sakafo saka sy rano fotsiny izy 🙂.
anmary dia hoy izy:
Izaho dia manana zanak'akanjo tabby tena tia, Yuyin no anarany, manana azy telo taona izahay ary anisan'ny fianakavianay izy, tia azy ny zanako.
Nandritra ny iray volana dia niditra an-tsokosoko tao am-baravarankely ny zazakely mpanafika, niverina isan'andro izy, heveriko fa an'ny mpifanila trano io, tsy haiko tsara, ankehitriny tsy mandao ny trano intsony izy, miandry ahy ho avy mody avy any am-piasana dia mivoaka hitsena ahy izy, be fangoraham-po izy, mandehandeha isaky ny dingana, fitiavana !!! Mahatsiaro aho fa nitaona ahy !! Tsy fantatro hoe firy taona izy, nefa lehibe izy, ary tsy hitako izay hatao…. omeo vaksiny izy? Atero volo io? Misalasala aho satria mety ho an'ny mpifanolobodirindrina amiko io ary tsy fantatro raha tezitra izy, na dia vao tonga tany an-jaridaina aza ilay zanany nandritra ny telo herinandro, naka am-bava roa ary niverina tany an-tranoko (foana aho avelao hisokatra ho azy ny mpankafy iray) izany hoe miaraka amiko foana izy ... ao amin'ny, tsy napetrako tao amin'ny fianarana izy ... miaraka amin'ny mpankafy misokatra raha te hiala izy, satria manana alika matory aho ao anaty trano noho ny hatsiaka ... na izany aza !!! Faly aho fa tiako ity saka mahafatifaty ity, saingy tsy fantatro izay fihetsika tokony horaisina ... afaka manome torohevitra ahy ve ianao?
Ny toro-hevitro dia ny hametahana afisy »Cat Found» misy sary volom-borona, satria mety misy mitady azy.
Mandritra izany fotoana izany, karakarao toy ny efa nataonao ary raha afaka 15 andro eo ho eo dia tsy nisy nitaky an'io, dia manoro hevitra anao aho ny hanaovana azy io.
Salama, raiki-pitia tamin'ny tabila volomboasary volom-borona aho nandritra ny 2 volana, hoy izy ireo amiko fa hanana volo lava izy izay mahatonga ahy ho faly kokoa handray azy. Marina ve fa sarotra ny toetran'ny voasary ??? Sa angano angaha? Io ihany no mahatonga ahy hisalasala. Inona no azonao ambara amiko momba an'io? fiarahabana
Ny loko tsy mamaritra ny toetrany. Marina fa ny saka mainty dia mazàna milamina kokoa noho ny sasany, ary ny voasary dia mazàna ho filalaovana amin'ny fahatanorany, saingy miankina betsaka amin'ny biby tsirairay ary, ambonin'izany rehetra izany, amin'ny tontolo iainana itomboany sy iainany.
Azoko lazaina aminao fa nanana saka volomboasary aho tamin'izaho mbola kely, ary malalako izy io: tony sy be fitiavana tokoa.
Salama Monica, manoratra aho misaotra anao noho ny valinteninao momba ny toetran'ireo namana tsara volo ireo. Lazaiko aminao fa rehefa avy namaky anao aho dia naka ilay saka ary tsy ho mamy sy be fitiavana kokoa ary mpiara-mitory aminy io, efa ho 5 volana izao ary io no iray ao an-trano.
Misaotra anao, ny hevitrao no nahatonga ahy nanapa-kevitra satria tsy fantatro fa nanana fitsarana an-tendrony tamina zanak'ondry orange aho. fiarahabana
Tsara, faly aho fa niasa taminao. Miarahaba anao kely! 🙂
Ursula Santoyo dia hoy izy:
Salama, manana zanak'akanjo tabby mavo aho, izy no fitiavako ny fiainako, ity lahatsoratra ity dia nanampy ahy hahafantatra ny taranany satria eo am-panoratana azy ho mpikambana ao amin'ny fianakaviana aho, misaotra betsaka noho ireo lahatsoratrao
Mamaly an'i Ursula Santoyo
Misaotra anao naneho hevitra 🙂. Miarahaba antsika mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana !!
Salama. Mieritreritra ny hividy persiana brindle aho .. Mihevitra ve ianao fa mavitrika kokoa noho ny Persianina fotsy fotsy ity? Tena tiako izany satria ho an'ny zanako vavy 10 taona. MISAOTRA
Ny lokon'ny saka dia tsy mitaona ny toetra amam-panahy. Eny, marina fa ny saka tabby dia mazàna mavitrika kokoa, saingy misy ny zava-drehetra. Rehefa misalasala aho dia manoro hevitra aho ny handany fotoana amin'ireo zanak'alika. Azonao atao ny misafidy ilay tianao indrindra. 🙂
Na dia tsy hivoatra tanteraka aza ny toetrany dia azonao atao ny mamantatra ny toetrany.
Na izany na tsy izany, ary tsy te-ho tonga amin'ny toerana tsy iantsoan'izy ireo ahy, efa nieritreritra tsara ny hanana saka ve ianao? Manontany anao aho satria afaka miaina 15 taona na mihoatra izy ireo. Y omeo saka amin'ny krismasy tsy mandeha foana io.
Salama! Izaho dia nanana alika mpiompy foana, hatramin'ny enim-bolana lasa izay, rehefa niseho an-tranoko ny saka taby volomboasary herintaona na mahery, ary nanapa-kevitra ny handray ahy, minoa ahy fa mbola tsy nifankahita tamim-pitiavana sy tamim-pitiavana ary mpiambina kokoa noho izy aho, mahafatifaty tanteraka izy !!! Malemy fanahy, mahafantatra tsara, manaraka ahy manodidina ny trano aho, raha mipetraka aho, mipetraka eo akaikiko izy, raha mahandro aho, dia fantany ny fihetsiko rehetra, rehefa mivoaka aho ary miverina dia mivoaka hihaona izy. izaho sy mikasoka ny tongotro am-pandehanana, TIA TANINDRAZANA !! Satria sambany aho nanana saka, tsy fantatro hoe hanao ahoana ny hafa, fa mahafinaritra ireto karazana kittens ireto!
Mahafinaritra… 🙂 Nampitsiky ahy ianao eh, Serieux, arahaba soa. Raha isainao, dia samy faly ianao, ary izay no zava-dehibe.
Miarahaba anao indray
Talohan'ny nahazoako ireo saka mainty sy fotsy 5 dia nanana an'ity iray ity aho dia tena tia ahy izy ary maditra ny anarany dia nihetsika satria tena notafihin'ny zava-drehetra izy ireo ary nanandrana namonjy azy izahay fa tsia ... maty izy 🙁 fa azoko ihany ny kittens 5 nataoko 🙂 Niezaka nanao izay azoko natao aho.
sara jiemenz dia hoy izy:
Salama, azonao atao ve ny manoro hevitra ny tsy hisakanana saka na handefasana azy io?
Manana kilalao volomboasary volomboasary volomboasary 3 volana tena tsara tarehy aho
Ahoana no hataoko mba tsy hanaikitra be izy ireo, fantatro fa tsy ny herisetra no anaovany azy satria izy purrs dia toy ny fanehoam-pitiavana fa tsy refesiny ny heriny, fitiavana izany
Mamaly an'i sara jiemenz
Ny taona tena atokana indrindra hialana volo na handrarana saka dia 5-6 volana. Amin'ny 3 volana dia mbola tanora tokoa izy.
Mba hianarana ny tsy hanaikitra anao dia mila esorinao tsotra izao ny tananao isaky ny avelanao eo amin'ny tany raha eo amin'ny seza na eo am-pandriana no misy azy.
Mila manam-paharetana sy tsy miovaova ianao, fa amin'ny farany dia ho hitanao ny fomba hahatratraranao azy. Omeo biby soavaly na kilalao hafa hitsakotsako izy fa tsy amin'ny tananao.
Mila ny torohevitrareo aho, ny zanak'akaneliko dia tokony ho eo anelanelan'ny 2-3 taona, fialan-tsasatra ny zanako, ny zanako lahy tonga voalohany niaraka tamin'ny zanany vavy, ary amin'ity herinandro ity dia tonga miaraka aminy ny zanako vavy, izany hoe hanana kittens telo aho tao an-trano, rehefa tonga ny saka voalohany, nahasosotra ny saka ahy, nimonomonona izy ary nibitsibitsika, natahotra be ilay saka ary tamin'ny andro voalohany dia tezitra mafy izy, nitomany ary tsy nilamina, tokony holazaiko fa misaraka amin'ny tontolo iainana izy ireo, saka saka zanako ao amin'ny efitrano iray ary ny sakaikako any amin'ny iray hafa, rehefa mivoaka ny saka dia mihidy amina toerana hafa ny saka ary ny mifamadika amin'izay dia mandeha roa andro toy izao isika, afaka telo andro dia ho tonga ny zanako vavy miaraka amin'ny zanany (tokony hilaza aho fa ireo saka roa ireo (ny zanako lahy sy ny zanako vavy) miara-monina izy ireo ary akaiky dia akaiky), te-hangataka torohevitra aho mba ho sakaizan'izy ireo ny sakaikako! Farany dia ny toerany io ary manafika azy ny zana-kisoa, latsaky ny iray taona izy ireo! Sa tokony hotehiriziko hatrany amin'ny toerana mitokana mandritra ny roa volana manaraka? Mba ampio aho azafady!! Misaotra anao! Ahoana no fomba hahazoako namana sy hilalaovako ny olon-drehetra?
Raha mifanaraka ny saka roa, ny torohevitra omeko dia mandritra ny herinandro dia ao anaty efitrano iray ihany izy ireo ary ny saka saka tsy mandry manodidina ny trano. Amin'ny andro fahatelo, apetraho eo amin'ny toerana ahafahan'ny saka mandre azy ireo ny fandriana saka, ary ny fandriana saka ao amin'ny efitrano misy ny saka. Ny ampitso, nosoloany indray ny fandriana. Ataovy indray mandra-pahatapitry ny fito andro.
Manomboka amin'ny herinandro faharoa dia esory ny saka mba hahafahan'izy ireo miaraka amin'ny saka. Araho maso izy ireo.
Raha hitanao fa misento izy ireo dia ara-dalàna izany. Fa raha hitanao fa misy amin'ireto telo ireto mitebiteby be ary mikasa ny hanafika (volo mibontsina, rambo miboridana, maso mivelatra, vava misokatra mampiseho vona, mimonomonona), ampidiro ao anaty efitrano ny saka ary andramo indray ny ampitso.
Raha azonao atao dia ezaha atao Feliway, izay vokatra manampy azy ireo ho tony kokoa. Amidy amin'ny fivarotana biby fiompy izy io.
Adi dia hoy izy:
Salama, tao amin'ny zaridainan'ny sekoly nisy ahy dia nanipy saka telo vao teraka tao anaty boaty izy ireo, fianakaviana roa no naka zanak'ondry roa ary iray no nijanonako ary nitady saka mpitsabo mpanampy aho hanome azy ronono, noraisin'ny saka izy ary nomeko azy izay rehetra tiany, izao dia ho entiko mody izy, nefa azafady fa nesoriko tamin'ny reniny sandoka izy. Zanaky ny tigra izy, mahafinaritra sy be filalaovana izy, saingy kely ny toerana misy ahy ao amin'ny toerako ary mipetraka amin'ny rihana fahatelo aho, matahotra aho sao hianjera izy, inona no azoko atao. Thankssss
Mamaly an'i Adi
Firy taona izao ny saka? Raha latsaky ny iray volana izy dia tokony tazominy ilay saka nitazona azy, satria tsy misy ronono afaka mahasolo izay vokarin'ny saka.
Raha toa ka efa iray volana na mihoatra izy dia azonao atao ny manomboka manome azy sakafo malefaka (sakafo mando ho an'ny zanak'ondry), na sakafo maina voahosin'ny rano.
Mba hisorohana ny fianjerany dia tsy maintsy narindrinao ny varavarana sy ny varavarankely. Ny tena kely dia tsy ho sarotra aminy ny ho zatra miditra ao anaty trano. Azonao atao ny mametraka tariby (harato) eo amin'ny varavarankely na eo amin'ny lavarangana raha manana izany ianao.
Edgar garcia dia hoy izy:
Salama aho manana saka totozy izay nomena ahy roa volana lasa izay ary tiako be io. Sahabo ho 4 ka hatramin'ny 5 volana ny saka. Ao an-trano aho dia manana saka siamese tsy miankina amin'ny manodidina ny 7 taona eo ho eo; Nandritra izay fotoana rehetra nandehanany tao an-trano ilay saka, dia tezitra fotsiny ny Siamese ary nimonomonona taminy sy nibontsina ny nifiny isaky ny te-hilalao aminy ilay saka, dia tsy milefitra amin'izany izy. Na dia te hilalao aza ilay saka dia mandà azy ny siamese dia tena ratsy toetra be aminy. Tsy haiko raha ho toy izany foana na raha indray andro dia hiara-milalao aminy ny saka siamese na handefitra aminy. Novakiako tamin'ny Internet fa raha tsy nifankahazo izy ireo amam-bolana dia tsy hifankahazo mihitsy izy ireo ary tsara kokoa ny manome ilay saka hafa. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Edgar García
Manoro hevitra anao aho mba hanam-paharetana. Ny saka dia "mpiditra an-tsokosoko" ho an'ny saka lehibe, olona iray izay niditra ny faritaniny.
Mba hanampiana azy ireo dia tsara ny mampiasa Feliway amin'ny diffuser, ary manome loka maro ho an'ny roa tonta miaraka amin'izay. Ny mazàna miasa tsara dia ny kalon'ny famahanana mando.
Ny zavatra iray azonao atao dia ny mitazona ny saka ao anaty efitrano mandritra ny telo andro. Sarony lamba firakotra ny fandriany, ary manaova toy izany amin'ny farafaran'ny saka lehibe. Raha manolo ny lamba firakotra ianao amin'ny andro faharoa sy fahatelo, dia hataonao zatra ny fofon'ny iray hafa, izay hanampy azy ireo hihatsara kely.
Sonia Castro Lopez dia hoy izy:
Salama, vao nomena zanak'omby taby sy volomboasary aho, heveriko fa mbola tsy roa volana akory, matahotra mafy ilay zavatra mahantra ary tsy mamela ny tenany ho tratra, miafina sy misento amiko izy, nandany ny alina mitobaka. Misy torohevitra momba izany ve?
Valiny tamin'i Sonia Castro López
Miarahaba antsika mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana 🙂
Ara-dalàna raha matahotra be izy. Mba hanampiana anao kely dia amporisihiko ianao hividy Feliway (ao anaty diffuser), ary omeo sakafo am-poan-dreniny mando isam-potoana izy. Ny voalohany dia hanome anao fahatokisan-tena, satria vokatra vita amin'ny pheromones sentetika mampihena ny saka izany; ny sakafo hahatonga anao hatoky tena haingana.
Mazava ho azy fa zava-dehibe ihany koa ny manasa azy hilalao, ohatra amin'ny tady. Tsikelikely dia ho safosafo, azo antoka.
Manana saka 3 aho, lahy iray ary vavy 2. Avotra daholo.
Aleo mandray na manavotra toy izay mividy, tsy isalasalana. Miarahaba anao 🙂
Hanao saka sakazy tabilao efa 2 volana izahay. Ao an-tranoko (rihana fahadimy) manana varavarankely lehibe dia lehibe aho. Matetika ve ny saka dia manana parachutist syndrome (te hitsambikina avy eo am-baravarankely)? Misy fomba fanabeazana ny saka tsy hijery ivelany? Tsy te-hametraka efijery amin'ny varavarankely ianao.
Miarahaba sy arahaba ho an'ny tranonkala.
Eny, ny saka dia mety manana parachutist syndrome syndrome. Manana lahatsoratra miresaka momba azy izahay, eto.
Ny tena atolotra sy mahomby indrindra dia ny fametrahana harato, io no azo antoka indrindra ho azy.
Mildred dia hoy izy:
Salama, nianatra kittens roa nandritry ny 3 volana aho, ny iray volomboasary noho ny iray hafa, mpirahalahy izy ireo, sambany niaraka tamin'ny saka aho ary tiako ilay izy, madio be izy ireo mampiasa ny boatin'izy ireo, heveriko fa nampianatra ilay reny tena tsara izy ireo. Tena tia milalao sy be fitiavana izy ireo. Manana tionelina, baolina ary tapa-kazo izay misy volom-borona amin'ny tendrony ankafizin'izy ireo izy ireo, ary fandriana tsy ampiasainy. Aleon'izy ireo ny seza sandry hahaha fa tiako izy ireo. Misy zavatra torohevitrao hataoko mba hahatsara azy ireo?
Valiny tamin'i Mildred
Heveriko fa manana izay rehetra tadiavin'ny saka izy ireo: olona iray faly amin'izy ireo, kilalao, fandriana, ...
Omeo sakafo saka-mando mando izy ireo indraindray. Tian'izy ireo izany 🙂
Beatriz Ariza dia hoy izy:
Manana iray nalaiko tamina toeram-pialofana aho, vao tapa-bolana izy io ary efa herintaona sy 2 volana.
Avy hatrany dia nangalatra ny foko izy. Tena tia milalao sy ratsy toetra izy. Tena orinasa tsara izany, izay alehako dia manaraka ahy izy, tsy irery irery aho fa raha ... rehefa te hanala baraka izy dia mitady ahy, dia miezaka mandositra foana izy
Mamoha ahy maraina be dia be izy. Ao amin'ny fianakaviako dia tsy tia saka izy ireo ary hatramin'izay fotoana izay dia tsy mitsidika ahy izy ireo, azoko tsara fa manana ny Timmy aho 😉
Valiny tamin'i Beatriz Ariza
Brenda perez dia hoy izy:
Salama Monica, lazaiko aminao fa tsy mahazaka saka aho, nivonto ny masoko ary nikohaka be ny tarehiko, tao anatin'ny fotoana fohy, dia nasehon'ny marary iray ilay sakaizako rehefa nakariko ilay izy dia hitako fa nisy kofehy volamena nivoaka tao am-poko. manoloana ny saka (tsy mandainga aho, tena izy io) ary tsy nirehitra na niteraka allergy aho, nijaly izy satria tsy nifanaraka tamin'io trano io satria matahotra alika be izy ary misy iray any, tiako izy amin'ny foko rehetra dia 5 volana izy ary 1 taona lasa izay, manana izany aho, ny faran'ny herinandro dia nihinana kitapo izahay ary saika maty dia naharitra isaky ny 2 ora izahay nanome serum azy ireo ary nampahafantatra azy ireo izany mihoatra ny 24 ora, soa ihany satria ny mandoa rehetra nomeny azy dia azony noroahina fa saingy tamin'io fotoana io dia sitrana izy ary tsy zaka, manaikitra be loatra na dia misy kilalao aza eo afovoany, manintona ny voloko izany. Manaikitra ny vadiko ny zanako lahy ary tsy nanao izany izy, mifidy zavatra amin'ny tany izy, mianika hatraiza hatraiza ary mihinana izay hitany rehetra, ny iray mibedy azy ary mamaly ahy tsy mahalala fomba rehetra (heh, fa mahafatifaty) ary ankehitriny dia mihombo izy, miady aminay izy , tia antsika Izy halany isika, tena mahery vaika tsy fantatro izay hatao hafa ... talohan'ny nitoerany tao an-trano izao dia tsy maintsy avelantsika eo amin'ny patio mihidy ao amin'io toerana io izy, ary amin'ny alalako mikorisa kilalao, baolina, totozy, tsihy tadiaviny aho nofonosiny lamba Makà lamba firakotra ary esory borosy nify ny volombavany sy ny tarehiny, nefa reraka be izy, tsy hitako intsony izay hatao ... ny manaikitra ataovy malahelo aho, maharary anay izany ... Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao
Valiny tamin'i Brenda Perez
Ny zavatra voalohany hatoroiko dia ny tsy anananao ao amin'io toerana io. Hahatonga anao hatahotra kokoa izany satria efa nahazatra ny tao an-trano taloha.
Azoko tsara fa tsy tianao hanaikitra izy, fa ampianaro azy fa mila manao zavatra hafa ianao. Ohatra, isaky ny mikasa hanaikitra ianao dia mandehana miala aminy fotsiny, avelao irery izy. Rehefa milamina izy dia omeo fanafody na kilalao saka.
Aza milalao azy io koa. Midika izany fa tsy alika izany. Imbetsaka isika rehefa milalao alika dia mampitoloko azy ireo, manome kilalao azy ireo ary misintona azy, ... tsara, manao andian-dahatsoratra izay isika, raha manao amin'ny saka dia mety hahatsapa ho tandindomin-doza izy ireo ary, noho izany, fanafihana. Tsy tokony terena hanao zavatra koa izy.
Ambonin'ny zava-drehetra, mila manam-paharetana be ianao. Ny olana eo amin'ny fitondran-tena dia mety maharitra herinandro na volana maromaro vao vita. Fa amin'ny fanajana sy ny fitiavana dia misy azo atao 🙂.
Lena dia hoy izy:
Salama! Rehefa milaza ianao fa tsy tokony hanome serealy azy ireo, dia sakafo voalanjalanja ve no tianao holazaina?
Valio i Lena
Tsia, ny sakafo rehetra no tiako holazaina. Tsy afaka mandevina tsara ny serealy ny saka, ary matetika io antony io dia miteraka olana ara-pahasalamana, toy ny allergy na cystitis.
Salama, fotoana vitsy lasa izay dia namonjy kitapo roa toy izany teny amin'ny arabe aho, tsy niaraka tamin'ny toerana iray izy ireo, ny iray niseho voalohany ary ny sasany minitra taty aoriana tena akaiky, izao dia te-hanontany aho fa samy manana ny vatany izy roa, sarotra ny manavaka azy ireo, izy ireo koa dia mitovy amin'ny fihetsika saka jimaguas na zavatra mitovy amin'izany mety misy
Saka kambana? Tsy mbola henoko mihitsy, marina. Fa eny, mety hitranga izany.
Manana saka miaraka amin'ireo toetra ireo aho, izay nalainay tamin'ny fananganana azy tamin'ny faha-4 taonany, izay ifalianay. Izy dia mamy, be fitiavana, tia milalao, tia mandray ary tsy mitsahatra mihombo rehefa manadala azy isika. Izy, 7 volana, sy ny saka mahazatra anay, 15 taona, dia miara-miaina. Mifanaraka tsara izy ireo amin'ny ankapobeny. Ny "fa" tokana dia tsy manarona fofona amin'ny fasika, ary maimbo ny ñorda an'ny olona voaheloka ... Misy ve ny vahaolana sa miandry azy hihamatotra bebe kokoa? Misaotra mialoha.
Ny tsy manarona ny fivondronany amin'ny fitsipika dia ara-dalàna ary manimbolo koa izy ireo. Fa ... karazan-tsakafo inona no omenao azy?
Manontany anao aho satria efa nanamarina aho fa raha omenao izay tsy manana serealy (karazana applaws, Tsiro ny ala, Orijen, sns.) Tsy dia matanjaka loatra io fofona io. Marina fa ny fananana hena fotsiny dia lasa lafo kokoa ny vidiny, saingy miely bebe kokoa izany satria mahavelona kokoa izy ireo, ary amin'ny habetsaky ny habetsany dia efa afa-po izy ireo.
Ny varimbazaha (vary, oatmeal, katsaka sns) dia tsy ilain'ny saka, ary mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe, toy ny cystitis, tsy afaka mandevona azy ireo.
Misaotra Monica. Hanandrana ny sakafo arosonao izahay.
Kelle dia hoy izy:
Maniry aho raha manana tabby volomboasary, handresy lahatra ny reniko aho hamela ahy hanana iray
Valiny tamin'i Kelle
Curiosities an'ny saka Andean
Ahoana ny fampitahorana ny saka mania